CUNNOOYINKA CAANAHA NAFAQADA - XOOLAHA
Sidee si habboon u baruurta lo'da
Marka aad iibsato lo'da yar ama horey u ah xayawaan weyn, waxaad dhab ahaantii dooneysaa inaad natiijooyinka ku hesho qaabka hilibka iyo caanaha.
Si loo helo wax soo saar ku filan, waa in xoolaha si fiican loo quudiyo.
Laakiin waxaa jira noocyo badan oo ah naaxinta, mid kastoo uu leeyahay sifooyinkiisa.
Istaraatiijiyada ay tahay inaad raacdo waa adiga.
Badanaa, xayawaanka yaryar ama lo'da la diiday ayaa sabab u ah in la quudiyo.
Celcelis ahaan, habka caloosha naasuhu wuxuu soconayaa 4 ilaa 6 bilood, xayawaanka qaangaarka ah ayaa caadi ahaan caadi ahaan 3 ilaa 4 bilood. Dhamaan xayawaanka waa in loo qaybiyaa kooxo, kooxo badan oo ka mid ah kooxahaas ayaa ah, ka sii wanaagsan natiijooyinka naas nuujinta.
Marka la eego miisaanka la helo xayawaanka, kaalin muhiim ah ayaa lagu ciyaaraa shuruudaha xabsiga, gaar ahaan jiilaalka. Caanaha la jecelyahay isku xir dharka, u siiyaan iyaga oo bilaash ah si ay u quudiyaan oo u cabbaan bowdada.
Qolka ay ku jirto lo'da ama digaagga waa in la joogaa Nidaam hawo wanaagsantaas oo shaqeyneysa xataa xilliga jiilaalka.
Haddii quudinta la qorsheynayo in la sameeyo xagaaga, markaa taasi waxaad u baahan tahay inaad qalab gaar ah ku sameyso waddada, taas oo aad ka sarayso taas oo aad u baahan tahay inaad sameysid daadad, kaas oo aad u baahan tahay inaad dejiso kuwa cabaya iyo quudinta.
Maanta, waxaa jira laba nooc oo lo 'ah: aad iyo aad u weyn.
Neefsasho degdeg ah
Nidaamkan naaxinta ayaa loogu talagalay koritaanka murqaha, ma baruurta, masses ee ubaha yar yar.
Xayawaanka yaryar waxay cunaan quudin yar marka la barbardhigo lo'da si ay u helaan 1 kg oo miisaan. Iyada oo qayb ka ah naas nuujinta culeyska miisaankoodu yahay 1 kg, digaaga da'doodu u dhaxayso 15-18 bilood waxay cunaan celcelis ahaan 7 - 7.5 halbeeg oo cunto ah.
Caadi ahaan, lo'da dhallinyarada iyo dibedda hilibka ah waxay ku xiran tahay naas nuujin, ama digaaga jiilka kowaad ee ku dhashay markaad ka gudubtay lo'da caanaha hilibka ee hilibka.
Laakiin natiijooyinka wanaagsan ee qaabka miisaanka oo aad u fiican ayaa sidoo kale lagu muujiyaa caanaha, hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Haddii aan tixgelineyno tusaale cad, weylaha Simmental, Schwyz, Black iyo White iyo dhowr nooc oo kale oo miisaankoodu yahay 350-400 kg horeba da'da 17-18 bilood.
Marka la gawraco saadka da 'yarta, hilibka ayaa u soo baxaya tayo aad u sarreeya, laakiin weli, xaddiga dufanka ayaa loo rogaa in lo'da ujeedooyin hilib.
Dufanka degdegga ah waxaa loo qaybin karaa laba xilli:
marka hore - illaa iyo wakhtigaa sida dibi u gaaro miisaanka 400 kg
labaad - ilaa Duufku gaadhay miisaanka 650 kg.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo quudinta dhallinyarada sida habka xilliga nuujinta, oo ay tahay wakhtigii lagu bedelay duufka in ka badan ama ka yar "qof weyn" quudinta.
Saldhigga cuntada ee naas nuujinta xoog leh waa silage hadhuudh tayo sare leh. Waa tayada ka cayaarta kaalin aad u muhiim ah, maaddaama ay sii fiicnaanayaan quudinta, ka weyni waxay noqon doontaa miisaanka koritaanka xayawaanka.
Haddii aadan ogeyn nooca silage si aad u iibsato, ka dibna xusuusnow shuruudaha taxanaha ah ee qaybtan quudinta waa in ay la kulmaan:
Boqolkiiba qallalan ee qiiqa waa inay ahaataa heerka 32-35%
Kala duwan waa inay ahaato mid sax ah, taas oo ah, caloosha xayawaanka, in ka badan 73% walxaha dabiiciga ah waa in la dhimo.
Fiber khafiifka ah waa inaan ka badnayn 0.2 kg kiilo kalluun oo qalalan
Borotiinka caanuhu waa inuu ahaadaa ugu yaraan 70-90 g halkii kiilo oo qallalan
Haddii silage-gallo adag tahay ama aan macquul ahayn in la helo, waxaa lagu beddeli karaa alaab la mid ah oo laga sameeyey dhirta oo dhan dalagyada dalagga. Laakiin waa in aan xusuusanno in xayawaanku u baahan doono in la siiyo qadar badan oo silage sida, maxaa yeelay waa silage hadhuudh ah oo ah tamarta ugu xooggan.
Laguma talin in la isticmaalo silajka cawska, sida kubka dufanku u heli doono tamar aad u yar marka la cuno, taas oo, dabcan, u horseedi doonta baahida loo qabo in lagu kobciyo cuntada guud, iyo sidoo kale in la daahiyo geeddi-socodka naas-nuujinta.
Silage-ka waxa loo baahan yahay in lagu dhamaystiro wax la yiraahdo quudin adag. Hawsha ugu weyn ee noocan ah ee quudinta waa miisaanka. Maaddaama ay jirto borotiin qallalan oo ku jirta silo, cuntada waa in la buuxiyaa walxaha lagu kobciyo borotiinka.
Xayawaanka yaryar waxay u baahan yihiin borotiin ka badan ilaa bartamaha habka naaxinta, kadibna ka dib qaadashada qiyaasta borotiinka waa in aan la kordhin.
Qiyaasta borotiinka leh naas-nuujinta degdega ah waa inay ahaataa mid u dhiganta 22-24% cuntada. Sida maadadaas, kufsi, soybean ama qamadi, iyo sidoo kale digirta cagaarka ama digirta ayaa ah mid aad u fiican.
Mawduucyada waa in ay ahaadaan kuwo tayo sare leh. quudinta xayawaanka ku dhaca infakshan ama fungus lama ogola.
Waqtiga ugu horeeya, 40% ee cuntada guud waa inay ku dhacdo quudinta borotiinka ku jirta, iyo muddada labaad waa in la yareeyo heerka 28-30%. 2 - 3 kg oo diirada saaraya maalin kasta waxay noqonaysaa kubir ku filan miisaanka caadiga ah.
Waa muhiim in la siiyo xoolo yar yar oo leh fitamiino iyo maadooyin faa'iido leh. Ujeedadaas darteed, quudinta macdanta gaarka ah ayaa la sameeyay taas oo magdhow siinaysa maqnaanshaha suurtagalka ah ee kiimikada kiimikada muhiim u ah koritaanka iyo horumarinta xayawaanka.
Cuntada xoolaha waa in lagu dhajiyaa fosoor iyo kalsiyum (1: 2 saamiga). Sodium sidoo kale waa muhiim, oo siin kara xayawaan iyaga oo quudinaya cusbo.
Badanaa cunnooyinka macdanta waxaa lagu daraa diirada qiyaasta 2 - 3% ee qaddarka ugu dambeeya, laakiin mararka qaarkood xayawaanka yaryar waxaa la siiyaa vitamiino saafi ah oo qiyaas ah 60-80 g halkii maalinba.
Haddii aan soo koobno ​​oo aan soo saarno sifooyinka marxalad kasta ee naas-nuujinta, waxaan ku soo qaadan karnaa tiro kooban oo ah gunaanad.
Tusaale ahaan, muddada koowaad xayawaanku waa in uu si firfircoon u kordhiyaa tiradataasoo ah, salaantu waxay noqon doonaan maalin ka sii badan.
Si arrintan loo sameeyo, lo'd kasta waa in la siiyaa 1 kg oo hilib ah ama silage, 1 kg oo feed, oo ku jira borotiinka, iyo sidoo kale 1 - 1.2 kg oo ah qalab tamar leh.
Muddada labaad, korodhka miisaanka ayaa hoos u dhigi doona, iyo xayawaanka ayaa u baahan in la siiyo fiitamiin. Sidaa darteed, xaddiga silage ee la siiyay waa in la yareeyo 0.5-0.6 kg, 1 kg oo ah quudinta borotiinka waa in la siiyaa, iyo sidoo kale 1.5-2 kg oo tamarta quudinta tamarta.
Iyada oo qayb ka ah noocan ah naaxinta, noocyada kala duwan ee quudinta ayaa loo isticmaali karaa, tusaale ahaan, soodhaha dabacsan, bakeeriga iyo juuska, soodhaha baradhada, sigaarka iyo noocyo kale oo badan oo quudin.
Cuntada yaryar waxay sidoo kale u baahan tahay in la buuxiyo xoogga iyo kalluunka. Waxaad xayawaan kartaa xayawaan si habeysan: da'yar iyo qof weynba.
Geedi socodka oo dhan waa in loo qeybiyaa 2 xilli: bilowga (30 maalmood), dhexdhexaad ah (40 cisho) iyo kama dambeyn (20 cisho). Wakhti kasta waa in la dhigaa iyada oo la raacayo cunto gooni ah.
Qodobo raashin ah ayaa la siin karaa xayawaanka 70-kii maalmood ee ugu horreeya, ka dibna waa lagama maarmaan Ku darso cunto leh tiro badan oo ah dufaac.
Waxaa lagama maarmaan ah in xoolaha cuntada loo beddelo si tartiib tartiib ah, qiyaastii 7 - 8 maalmood. Nidaamka quudinta ayaa isku mid ah nooc kasta oo naaxin ah - cunto qaadashada waa inay ahaataa 3 - 4. Waa muhiim inaad bixiso lo'da biyo ku filan.
Faa'idada xilliga ugu horreeya waxay noqon doontaa ugu badnaan, tan iyo waqtigan borotiinka, baruurta iyo biyaha ayaa ku ururaya jirka xayawaanka.
Wakhtiga labaad, korodhka miisaanka ayaa hoos u dhigi doona, maaddaama habsocodka degdegga ah ee nudaha loo yaqaan "adipose" ka bilaabmaa.
Muddadii saddexaad, korodhka miisaanka ayaa kordhi doona mar kale haddii aad isticmaasho quudin fiican.
Lo'da xoolaha leh caleemaha ayaa loo tixgeliyaa ikhtiyaar aad u wanaagsan, maaddaama tan ay ka kooban tahay qadar badan oo karbohidraat, kalsiyum. Laakiin xaaladdan, cuntadu waxay u baahan doontaa inay ku darsato quudinta, oo ay ku jirto borotiin, fosoor iyo dufan. Sidoo kale Cuntada waa in lagu daraa quudinta borotiinka ku jirta, cuntada lafaha iyo milixda.
Marka ugu horeysa, xayawaanka waa in la baraa si uu u cuno qadar badan oo saxaro ah. Nidaamka la qabsashada waa inuu socdaa ugu yaraan 6 - 7 maalmood. Maalin kasta, lo'da weyn waa in la siiyaa 65 - 80 kg oo saxar ah, iyo kubka - 40 - 50 kg. Tirooyinkani waa in la yareeyaa dhamaadka habka naaxinta.
Cunto quudinaysa waxay taageeri doontaa habka dheef-shiidka, sidaa darteed waxay u baahan yihiin in la siiyo qiimeynta 1 - 1.5 kg halkii 100 kg oo ah miisaanka nool ee lo'da. Hay waxay ku habboon tahay kaydka dhalinyarada, waana ka fiicantahay in la siiyo roodhida guga xoolaha qaangaarka ah.
Marka aad nuugeyso barkeed waxay ka fiican tahay inaad isticmaasho baradho ama rooti. Baqshaddan waxaa ku jira biyo badan (ilaa 94%), iyo arrinta qalalan waxay ku jirtaa qadar yar oo borotiin ah. Badanaa, lo'du waa inay dhadhamiyaan noocaan quudinta.
Xayawaannada cusbada leh waxay u baahan yihiin in la siiyo tiro aan xad lahayn. Qiyaasta saamiga ah ee quudinta la siiyaa waxay u dhigantaa 15 - 20 kg oo barar ah 100kg oo miisaan ah.
Waa inuu joogaa xayawaanka dhirta. Waxaa lagu daadin karaa barda kulul, gaar ahaan maaddaama xayawaanka ay cuni doonaan cunto wanaagsan.
Maalin kasta, 7-8 kg oo hilib ah waa in la siiyaa lo'daha qaangaarka ah iyo dibi, 4-6 kg waxay ku filnaan doonaan weylaha. Cunto isku dhafan iyo shaciir ama hadhuudhka hadhuudhku waxay ku habboon yihiin sida xoogga loo saaro Maalin kasta, xayawaan kasta waa in la siiyaa 1.5-2.5 kg oo cunto ah.
Si loo daboolo baahida qofka weyn ee calcium, badanaa foorjiga ayaa lagu daraa si xoog leh (70 - 80 g oo ah caanaha 100kg maalintii).
Si looga fogaado jiritaanka cudurka cayayaanka ee aadka loo yaqaan 'snapper' - xayawaanka ayaa u baahan in la siiyo qufac (1 kg 10 litir oo boon) iyo sidoo kale xaaladaha qoyaanka ee hooseeya.
Silage waxay noqon kartaa lo'da lo'da inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Arrintan awgeed isticmaalaan hadhuudhyo silo gabbaldayaha.
Sidoo kale cuntada waa inay ahaataa caws, caano, diirad iyo noocyo kale oo ah dalagyada cawska. Mararka qaarkood, si loo buuxiyo yaraanta borotiinka, xayawaanka ayaa la bixiyaa, oo ay la socdaan silage iyo diirada, HOL. Halkan, waxa ugu muhiimsan waa in la daaweeyo qiyaasta, sidaa darteed ma jiraan wax ka badan 40-50 g oo ah HOL waa in lagu rido madaxa madaxa dhalinyarada, sida dhabta ah 80 g oo ah dhismaha waa in la siiyaa lo'daha qaangaarka ah.
Marka qoryaha la nadiifiyo 20 - 30% ee cuntada waa in la ururiyaa.
Haddii aad tiraahdo kiilogaraamyada, ka dibna madaxa madaxa isticmaalka dufanka muddada dhammaan naasku waa 200 - 250 kg. Maalin kasta, lo'daha qaangaarka ah iyo dibi waa in la siiyaa 35-40 kg oo silage ah, dhallinyarana waxaa ku filan ilaa 30 kg oo cunto ah.
Foosto iyo cusbadu waa inay ku jirtaa cuntada (10 ilaa 15 g oo ah kan ugu horreeya iyo 40 illaa 50 g oo ah kan labaad). Xilliga oo dhan ee naas-nuujinta qashinka dhalinyarada waa inaysan dhaafin 90 maalmood, iyo lo'da qaangaarka ah waxaa lagu hayn karaa cuntooyinkaas ilaa 70 maalmood.
Iyadoo bilawga xagaaga, dhammaan lo'du way ka wanaagsantahay in ay u tarjunto cagaarka cagaaran, laakiin marka lagu daro diirada.
40 - 80 kg oo cagaar ah ayaa ku filan hal xayawaan (waxay ku xiran tahay da'da), iyo dareenka waa in la siiyaa 2 ilaa 2.5 kg maalintii. Iyada oo ah isha soodhiyanka waa caajis oo lagu siinayo milixda lo'da.
Haddii aad rabto, waxaad ku daalin kartaa lo'daada iyo buluugaaga si aad uga dhaadhiciso natiijada. Natiijadu waxay noqon doontaa maaha oo kaliya maaddada hilibka la soo saaray, laakiin sidoo kale tayada.
Sidaa daraadeed waxaad dareemeysaa inaad xor u tahay inaad u iibiso lo'da si ay u quudiyaan